Skoda အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Skoda ကို Android 4.4 ကား DVD, တရုတ် Skoda ကို Android 5.1 ကား DVD ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:Skoda အန်းဒရွိုက်ကား DVD,Skoda ကို Android 4.4 ကား DVD,Skoda ကို Android 5.1 ကား DVD,Skoda အန်းဒရွိုက်ကား DVD 6.0.1,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Skoda အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Skoda အန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Skoda အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Skoda ကို Android 4.4 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Skoda ကို Android 5.1 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Octavia 2007 -2009 အတွက်2din GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၂၀၁၂ Octiva အတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကားမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Skoda Octavia စတီယာရင်ဘီး Android အတွက်2Din  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Skoda Octavia MT 2010-2014 အတွက် Android ကား DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Skoda Fabia အတွက် Android ကားရေဒီယိုအသံ 2015-2017  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octavia 2007-2009 ဘို့ကားတစ်စီးရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octavia MT 2010-2014 ဘို့ကားတစ်စီးအညွှန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထိပ်တန်း 2015-2019 ဘို့ကားတစ်စီးရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octavia 2014-2015 ဘို့ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octavia 2014 တစ်ခုမှာဒင်ကားတစ်စီးအသံဖိုင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octavia 2007-2009 များအတွက် AUTORADIO GPS စနစ်မာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octavia 2007 ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octavia 2010 ကားတစ်စီးဖျော်ဖြေရေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထိပ်တန်း 2015 ကားတစ်စီးအညွှန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octavia 2014 10.1 လက်မကားတစ်စီး DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octavia 2007-2009 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octavia MT 2014 အတွက်အော်တိုမာလ်တီမီဒီယာကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fabia 2017 ဘို့ဟာ android ကားတစ်စီး DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
7.1 Skoda Fabia 2015-2017 သည်စနစ်ကားအသံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Skoda Octavia 2012 မှာ Android ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Skoda OCTAVIA 2014-2016 သည်အန်းဒရွိုက်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octavia 2007 -2009 အတွက်2din GPS
Octavia 2007 -2009 အတွက်2din GPS Octavia 2007 -2009 အတွက်2din gps သည် GPS navigation နှင့် online / offline map အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့သည်။ အင်တာနက်အတွက် WiFi နှင့် Hotspot ကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။...
၂၀၁၂ Octiva အတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကားမာလ်တီမီဒီယာ
၂၀၁၂ Octiva အတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကားမာလ်တီမီဒီယာ 1, 3D Navigation: ကားစတီရီယိုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအချိန်နှင့်တပြေးညီလမ်းညွှန်မှုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ၊ အမြန်နှုန်း၊ မိုင်အကွာအဝေး၊ အထင်ကရအဆောက်အအုံ၏ပြသမှု၊ 3D...
Skoda Octavia စတီယာရင်ဘီး Android အတွက်2Din
Skoda Octavia စတီယာရင်ဘီး Android အတွက်2Din ၁။ Skoda Octavia စတီယာရင်ဘီး Android အတွက်2Din ၏လုပ်ဆောင်ချက်အများစုကို သင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ Skoda Octavia စတီယာရင်ဘီး Android အတွက်2Din သည် android 6.0 system, octa core CPU, 2G...
Skoda Octavia MT 2010-2014 အတွက် Android ကား DVD
Skoda Octavia MT 2010-2014 အတွက် Android ကား DVD ၁။ Skoda Octavia MT 2010-2014 အတွက် Android ကား DVD သည် ကြီးမားသောဂိမ်း application များအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသည်။ HD ချောချောမွေ့မွေ့သောမျက်နှာပြင်ရှိဂိမ်းကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ DVD player နှင့် CD...
Skoda Fabia အတွက် Android ကားရေဒီယိုအသံ 2015-2017
Octavia 2007-2009 ဘို့ကားတစ်စီးရေဒီယို
Octavia 2007-2009 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးရေဒီယို Octavia 2007-2009 များအတွက် DSP ကားတစ်စီးရေဒီယိုအတွက် 1.Built Octavia 2007-2009 များအတွက် Andorid အော်တို carplay ကားတစ်စီးစတီရီယိုအတွက် 2.Builit System and Hardware Parameters OS Android...
Octavia MT 2010-2014 ဘို့ကားတစ်စီးအညွှန်း
Octavia MT 2010-2014 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးရေဒီယို Octavia MT 2010-2014 များအတွက် DSP ကားတစ်စီးရေဒီယိုအတွက် 1.Built Octavia MT 2010-2014 များအတွက် Andorid အော်တို carplay ကားတစ်စီးစတီရီယိုအတွက် 2.Builit System and Hardware Parameters OS...
ထိပ်တန်း 2015-2019 ဘို့ကားတစ်စီးရေဒီယို
ထိပ်တန်း 2015-2019 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးရေဒီယို 1) အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံဒေတာခြင်းမရှိဘဲ Pre-install Google ကမြေပုံ () ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း, ထောက်ပံ့ပင်ကကို USB / SD ကဒ်, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်း Youtube ကိုဗီဒီယိုမှဗီဒီယို play, အ headrests...
Octavia 2014-2015 ဘို့ကားတစ်စီးစတီရီယို
Octavia 2014-2015 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးရေဒီယို 64GB အထိကို USB Port ကို / Micro SD ပေါက် () ထဲမှာ Built Octavia 2014-2015 ပံ့ပိုးမှု GPS စနစ် Navigation (မြေပုံဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ် app ကိုထည့်သွင်းမ) အတွက် 1) ကားကိုအညွှန်း, WIFI modem...
Octavia 2014 တစ်ခုမှာဒင်ကားတစ်စီးအသံဖိုင်
Octavia 2014 တစ်ခုမှာဒင်ကားတစ်စီးအသံဖိုင် ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်: 1. Octavia 2014 တစ်ခုမှာဒင်ကားတစ်စီးကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ audio-- ။ ဖောက်သည်လည်းနောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်။ 2. Octavia 2014...
Octavia 2007-2009 များအတွက် AUTORADIO GPS စနစ်မာလ်တီမီဒီယာ
Octavia 2007-2009 များအတွက် AUTORADIO GPS စနစ်မာလ်တီမီဒီယာ တရုတ်အတွက်ဦးဆောင်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအဖြစ်, Klyde ထိုကဲ့သို့သောရုရှား, တူရကီ, GCC နိုင်ငံများအဖြစ်နိုင်ငံအများအပြား,...
Octavia 2007 ကားတစ်စီးစတီရီယို
Skoda Octavia 2007 မှာ Android 8.0 ကားတစ်စီး DVD 1.Skoda Octavia 2007 ခုနှစ်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Octavia 2010 ကားတစ်စီးဖျော်ဖြေရေး
Skoda Octavia 2010 မှာ Android 8.0 ကားတစ်စီး DVD 1.Skoda Octavia 2010 မှာ Android ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
ထိပ်တန်း 2015 ကားတစ်စီးအညွှန်း
Skoda ထိပ်တန်း 2015 မှာ Android 8.0 ကားတစ်စီး DVD စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 1.Compatible: လာမယ့်သီချင်းမှ skip volume ကို adjust သို့မဟုတ်အခြားရုပ်သံလိုင်းအကူးအပြောင်း, အပေါငျးတို့သစတီယာရင် whell ပယ်သင့်လက်ကိုယူစရာမလိုဘဲ, Skoda ထိပ်တန်းအဘို့ဤ...
Octavia 2014 10.1 လက်မကားတစ်စီး DVD
Skoda Octavia 2014 မှာ Android 8.0 ကားတစ်စီး DVD 1) ကို Android 8.0 Oreo, ရမ်: 4GB, ROM ကို: 32GB, CPU ကို: Octa-Core Processor 1.5GHz, အရည်အသွေးမြင့်ရေဒီယို IC: NXP TEF6686, ပိုကောင်းတဲ့ဧည့်ခံခဲ့သည်။ 2) Built-in TDA7851 အသံချဲ့စက် IC, subwoofer အသံ...
Octavia 2007-2009 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ GPS
Octavia 2007-2009 ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ GPS များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ GPS Octavia, suite ယာဉ်များ Octavia 2007-2009 10.1 "HD ကို capacitive touch မျက်နှာပြင် ဖုန်းစာအုပ် function ကိုနှင့်အတူဘလူးတုသ်လက်အခမဲ့ဖုန်းမော်တော်ကား...
Octavia MT 2014 အတွက်အော်တိုမာလ်တီမီဒီယာကစားသမား
Octavia MT 2014 အော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ကားများအတွက်သင့်လျော်သော: Octavia MT 2010-2014 မည်သည့် applicaions မှဝင်ရောက်ဖို့က Android 6.0.1 နောက်ဆုံးထွက်စစ်ဆင်ရေးစနစ်, Rockchip PX5 Cortex A53 Octa Core 1.6GHz...
Fabia 2017 ဘို့ဟာ android ကားတစ်စီး DVD player
Fabia 2017 ဘို့အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို အန်းဒရွိုက် 7.1 SKODA Fabia ကားကို DVD - ဝတ်စုံ Fabia 2015-2017 Fabia 2017 အဘို့ဤဟာ android ကားတစ်စီး DVD player CPU ကို Rockchip PX3 Cortex A9, Quad-Core,...
7.1 Skoda Fabia 2015-2017 သည်စနစ်ကားအသံ
7.1 Skoda Fabia 2015-2017 သည်စနစ်ကားအသံ 1.7.1 ဟာ android နဲ့ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Skoda Fabia 2015-2017 သည်စနစ်ကားအသံ, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား,...
Skoda Octavia 2012 မှာ Android ကားကို DVD Player ကို
Skoda Octavia 2012 မှာ Android ကားကို DVD Player ကို 1.Skoda Octavia 2012 မှာ Android ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Skoda OCTAVIA 2014-2016 သည်အန်းဒရွိုက်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို
Skoda OCTAVIA 2014-2016 သည်အန်းဒရွိုက်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို 1.Steering ဘီးကိုထိန်းချုပ်သည့်အပြောင်းအရွေ့အပေါ်လုံခြုံစွာသင့်ရဲ့ဂီတ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူ, အဆင်သင့် plug ။ ဒီ functions များနှင့်အတူ,...
တရုတ်နိုင်ငံ Skoda အန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
1.Skoda ကို Android 4.4 ကား DVD ထောက်ခံမှုလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်: android စမတ်ဖုန်းနှင့် devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့်ကားကိုဦးခေါင်းယူနစ်များအကြားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာလိုအပ်သည့်အပိုမရှိဆော့ဗ်ဝဲနဲ့, ကို USB မှတဆင့်ယူနစ်ရန်သင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Skoda အန်းဒရွိုက်ကား DVD (2 din ကားတစ်စီး DVD), ဂီတ၏အနက်အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် 2. နှင့်လေထုတိကျသောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောချိန်ခွင်လျှာခဲ့တွေ့ကြုံခံစားဖို့သင်ပြီးပြည့်စုံသောအစက်အပြောက်ရောက်စေဖို့, ကောင်းမွန်သောဂီတနှင့်ပျော့ပျောင်းသောအလှတရားကိုပြ။ စွမ်းအင်တစ်ခုသဘောမျိုးရှိသည်ဖို့သာယာသောအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နှင့်ဂန္ကျက်သရေ၏ရေးစပ်ဂီတ, သိပ်သည်းဆ, သတင်းအချက်အလက်အသံပမာဏ, resolution နဲ့အနေအထားကိုအသိ၏ဒြပ်စင်ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့အဆင်ပြေဂီတကိုခံစားနိုင်အောင်, ဒါပေမယ့်လည်းဂီတသို့ကျွန်တော်တို့ကိုသဘာဝကျကျရန်ခွင့်ပြုသည်, လေးနက်ဂီတအတွေးများနှင့်စိတ်ခံစားမှု၏အမြင်နှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်စည်းချက်တဆင့်ကို Android 5.1 ကား DVD နှင့်အတူမြင့်တက်ထံမှဝမ်းမြောက်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်။
3.Skoda က Android 6.0.1 မော်တော်ကား DVD bulit-in ပါ WIFI ဟော့စပေါ့မျှဝေ: သင်တို့အဘို့လွယ်ကူပြီးချောမွေ့စွာအင်တာနက် access ကို browser ကိုအင်တာနက်, အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ watch, သင်၏မေးလ်စစ်ဆေးအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူဂိမ်းကို download apps များ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အညွှန်းကစား။ ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူ: သင်ထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic နှင့် Waze အားမြေပုံအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းမြေပုံများအားအလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Google ကမြေပုံနှင့်အတူ, သင်အရှိဆုံးတိကျမှုနှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသွားအလာဒေတာနှင့်ပိုပြီးရနိုင်။ သင့်ရဲ့လမ်းတစ်ဝှမ်းပိုမြန်လွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှရှာပါ။
Skoda အန်းဒရွိုက်ကား DVD Skoda ကို Android 4.4 ကား DVD Skoda ကို Android 5.1 ကား DVD Skoda အန်းဒရွိုက်ကား DVD 6.0.1 kia အန်းဒရွိုက်ကား DVD